Hanatsara ny feon-tsoratra ny WhatsApp ary hanana fotoana firaketana bebe kokoa | Vaovao momba ny gadget
Hanatsara ny feon-tsoratra ny WhatsApp ary hanana fotoana firaketana bebe kokoa ianao
Nifindra tamin'ny toerana fahatelo ireo antso. Eny, amin'ny antoko fahatelo, satria na ny hafatra an-tsoratra aza tsy mipetraka intsony amin'ny toerana voalohany amin'ny fampiasana ny serivisy fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa indrindra eto an-tany: WhatsApp. Eny tokoa, io no noeritreretinao: ny mpanjaka ankehitriny dia hafatra am-peo.
Mahalana ny mahita ny fomba ampiasain'ny taranaka vaovao WhatsApp amin'ny alàlan'ny findainy mampiasa an'io fampiasa io. Ary, na dia maro aza ny mpanelingelina ity fampiasana ity dia marina ihany koa izany ny fampiasana azy rehefa mandeha dia mahazo aina kokoa —Ary haingana— toy izay hanomboka hanoratanao ny fitendry virtual an'ny terminal.
Ny fialana amin'ny tsiro an'ny tsirairay, ny iray amin'ireo zava-baovao manaraka izay hampidirin'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra dia tokony hifandraika amin'ny firaketana audio. Amin'izao fotoana izao, mba hiasa ity, ny mpampiasa dia tsy maintsy manery sy mitazona ny kisary mikrô izay hita eo amin'ny efijery mandritra ny fotoana fandraisam-peo manontolo. Lavitra, voafetra 9 segondra ny faharetan'ireo audios ireo amin'izao fotoana izao.
Ity fomba ity dia handalo - farafaharatsiny amin'ny Android. Io no azon'izy ireo fantarina hatrizay WABetaInfo. Ny pejy dia misy fanavaozana amin'ny ho avy izay fanatsarana an'io asa malaza io. Hanomboka izahay amin'ny filazanao aminao fa tsy tokony ho 9 segondra intsony ny audios raha be indrindra. Ny fotoana firaketana dia hitombo hatramin'ny 15 minitra.
Ary koa, ny fanindriana ny efijery amin'ny fotoana rehetra dia zavatra taloha ihany koa. Ary io dia manomboka izao dia hihatsara ny zavatra ary ny horonam-peo dia afaka mihazakazaka ao ambadika (amin'ny sary faharoa dia hitanao ny fomba fiasan'izy io). Izany hoe, raha vao manomboka ny fandraisam-peo dia azonao atao ny mampiasa rindranasa hafa na manova efijery, manana ny safidy hijanona hatrany ary handefa ny feo avy ao amin'ny foibe fampandrenesana. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy daty famoahana ny fanatsarana, ary tsy misy koa fampahalalana momba ny fotoana hahafahan'ny mpampiasa iPhone mankafy azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Hanatsara ny feon-tsoratra ny WhatsApp ary hanana fotoana firaketana bebe kokoa ianao
Spotify dia tonga tokoa amin'ny Xbox One
Hiseho amin'ny taona 2 ny iPhone SE 2018 ary manana hery bebe kokoa